बजाज नयाँ पल्सर २५० सार्वजनिक,मूल्य कति ? - ramechhapkhabar.com
बजाज नयाँ पल्सर २५० सार्वजनिक,मूल्य कति ?
बजाज अटोले २५० सिसी सेग्मेन्टमा नयाँ बाइक सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले गत साता मात्रै नयाँ पल्सर २५० सार्वजनिक गरेको हो। बाइकको बाहिरी आवरण निकै सानदार र नयाँ ढंगमा डिजाइन गरिएको छ। कम्पनीले यसको डिजाइनिङमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। भारतीय अखबार अटो हिन्दुस्तानका अनुसार नयाँ पल्सर २५० नयाँ इन्जिन प्लेटफर्ममा आधारित छ। त्यसैले यसको प्रदर्शनी पनि राम्रो हुने बताइएको छ।
हालै भारतमा सार्वजनिक बजाजको यो नयाँ पल्सर २५० नेपाली बजारमा समेत सार्वजनिक हुन समय लाग्दैन। यदी तपाईं बजाजको नयाँ पल्सर २५० किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो बाइक किन्नुको फाइदा र बेफाइदा भने यस प्रकारको छः
नयाँ पल्सर २५० स्प्लिट–ट्युबुलर फ्रेममा उपलब्ध छ। जसले गर्दा बाइकको डिजाइनिङलाई सानदार बनाउँछ। त्यस्तै बाइक ह्यान्डिलिङ पनि सहज छ। नयाँ चेरिस प्रयोग गरिएकोले पनि नयाँ पल्सर २५० को तौल पहिलेका मोडलभन्दा हलुका भएको कम्पनीले बताएको छ।
बाइकमा पुरै एलइडी लाइट जडित छ। यसको अगाडि भागमा एलइडी हेडल्याम्पसहित डे टाइम रनिङ लाइट छ। बाइकको टेल लाइट पनि एलइडी छ।
नयाँ पल्सर २५० चलाउँदा सहज महशुस हुने बताइएको छ। नयाँ इन्जिन जडित यो बाइकको प्रदर्शनी पनि राम्रो छ। ग्लास मिल्ड नाइलन संरचनाले तयार पारिएको हुनाले बाइकमा कम्पन कम महशुस हुन्छ।
२५० सिसी सेग्मेन्टको नयाँ पल्सर २५० मा सिंगल–सिलिन्डर ओइल–कुल्ड इन्जिन जडित छ। जसले २४.५ पिएस पावर र २१.५ एनएमको अधिकतम टर्क जेनेरेट गर्छ।
नयाँ पल्सर २५० किन्नुका थुप्रै फाइदाहरू छन्। यसको बेफाइदाभन्दा पनि कम्पनीले बाइक निर्माणमा केही सुधार भने गर्न सक्ने अटो हिन्दुस्तानले जनाएको छ। बाइक पाँच स्पीड ट्रान्समिसनमा आधारित छ।
तर कम्पनीले यसलाई छ स्पीड ट्रान्समिसनमा आधारित बनाउन सक्थ्यो। जसले गर्दा बाइकको प्रदर्शनी अझ राम्रो हुने सम्भावना छ। त्यस्तै कम्पनीले बाइकको टायरहरू अहिले जडित टायरभन्दा ठूलो प्रयोग गर्न सक्ने सुझाव अटो हिन्दुस्तानले गरेको रिभ्यूमा दिएको छ।
नयाँ पल्सर २५० बजारको निकै प्रतिक्षित बाइकमध्ये पर्छ। हाल भारतीय बजारमा यो बाइक भारु १ लाख ३८ हजारमा सार्वजनिक भएको हो।